87% yesaphulelo kwiCoursera Coupons & Code Discount
Coursera Iikhowudi zekhuphoni
12% Off Select Catagories Yonga imali eCursera ngokuqala kwetyala lamahhala leentsuku ezisi-7. Unokubhalisela ileta yabo yeendaba ukufumana intengiso ekhethekileyo kunye nezaphulelo zeCoursera. Okokugqibela, jonga iikhuphoni ze-Coursera kanye apha kwiiKhonsoni zeGroupon ukufumana ulondolozo olukhethekileyo kuso nasiphi na isihloko onokucinga ngaso.
Iipesenti ezingama-5 zeOrders yee-1299 Ezona Coupons zintle ze-Coursera zika-Okthobha ka-2021 -Ngoku ziyaSebenza: I-2 Coursera yasungulwa ngo-2012 njengeqonga lokufunda ngekhompyutha ukunceda nabani na afunde izakhono ezitsha kwiwebhu. Ngaphezulu kwe-47 yezigidi batyikitye ukuba bathathe iiklasi ezikwi-Intanethi ukusukela ngoko.
Thatha ukuya kuthi ga kwi-10% yesaphulelo kwi-odolo yakho ngeKhowudi e-Coursera.org Iikhuphoni ze-Coursera Ukunikezelwa kweeKhosi kunye neKhowudi zokuPhucula; Ikhowudi yekhuphoni yeKhosi yeKhosi: Ixabiso lezifundo ezikwi-Intanethi @ Ixabiso eliphezulu: I-Coursera yasimahla: Funda iKhosi eziDumileyo zaSimahla: Ikhuphoni ye-Coursera: Ngoku Zuza isiDanga kwi-Intanethi: Ikhowudi yesaphulelo seC Coursera: Funda kwaye ufumane isiQinisekiso: Ikhowudi yokuPhuculo yeC Coursera: Joyina iKhosi nge-100% yoQeqesho kwi-Intanethi
Eyongezelelweyo 12% yesaphulelo Khetha Iindidi ezineKhowudi yeKhuphoni Iikhuphoni zekhosi kunye neKhowudi zokuThengisa. Izibonelelo ezingama-40 eziqinisekisiweyo zangoSeptemba 2021 Gcina ezinkulu eCursera ngezivumelwano ezimangalisayo kunye neekhowudi zokunyusa! Iikhowudi zokunyusa / iiKhosi zeNtengiso. Intengiso Okudume kakhulu. Jonga iKhosi yokuFunda ngomatshini kwiKhosi yokuSebenza yeKhowudi. Cofa uze uqalise. Iphela 1 ...
Yonwabela i-5% isaphulelo kwi-1299 + yeSiza ngokubanzi kunye neKhowudi yePromo Ngelixa ujonga amakhuphoni e-Coursera, kusenokwenzeka ukuba uya kuqaphela ukuba kukho iindidi ezithile zeentengiso ezikhoyo. Ngelixa kuxhomekeke kwixesha lokukhangela ezo ntengiselwano, unokulindela ukufumana iziponi ezidweliswe ngezantsi kunye nezaphulelo ezinxulumene noko. Izaphulelo ezikhethekileyo kwisihloko
Fumana iipesenti ezingama-5 ngeKhowudi yokuThengisa Iikhowudi zokunyusa i-Coursera kunye nezaphulelo Amakhuphoni aqinisekisiweyo-agqityiwe ukuhlaziywa: nge-20 kaSeptemba 2021. Yiba nokufikelela kwezona mfundo zibalaseleyo kwihlabathi eCorsera. Kweli hlabathi litshintsha ngokukhawuleza, uye phambili ...
Iipesenti ezingama-5 zesaphulelo + sokuHambisa simahla IiNkonzo zaNgoku eziPhezulu zeCorsera: Nika iipesenti ezingama-50, Fumana isaphulelo sama-50%. I-50% Ikhuphe ikhosi okanye iNyanga yokuqala xa uMhlobo wakho ethenga okokuqala. Zizonke iiNkonzo. 2. Esona Saphulelo.
Eyongezelelweyo $100 Off $999+ Ukuthenga At Coursera.org Fumana i-100% yekonsoni esebenzayo yekhuphoni ngoFebruwari 2020 ukuze ufumane isaphulelo esikhulu kuzo zonke iikhosi ze-Intanethi. Ikhosi yasimahla yeekhosi. Ngoku yeka ukuhlawula iindleko zokubhalisela i-coursera kuba zonke izifundo ze-coursera zikhululekile ukuba zifunde nanini na, naphi na. Zonke izithembiso zokwazisa ziya kukunceda uhlawule umrhumo wokufumana ukufikelela kwizabelo ezihleliweyo kunye nethuba lokufumana ...
Thatha ukuya kwi-53% yesaphulelo Khetha i-X kunye ne-T Series ye-ThinkPad laptops Ikhuphoni yeKhosi ye-Coursera 100% nge-Septemba ngo-2021. Ngaba ujonge ezo Khowudi zesaphulelo okanye Ikhuphoni, ezinako ukunciphisa i-100% kwi-odolo yakho ekwi-intanethi ku- coursera.org. Thenga ngokukhawuleza ngaphambi kokuba iKhowudi yokuKhuthaza iKhosi ihambe!
Coursera.org $100 Off Order NgeKhowudi yeKhuphoni Iikhuphoni ze-Coursera kunye nee-Offers namhlanje -Fikelela kwi-50% OFF-Thatha iikhosi kwi-Intanethi ukusuka kwi-Coursera ngamaxabiso esaphulelo ngokusebenzisa izibonelelo kunye nezahlulo ezinikezelwa yi-Couponminds. Ezi khowudi zekhuphoni zihlaziywa rhoqo ukuze zilungele umsebenzisi. Khetha nje ezona coupons zakho zintle kuludwe lwezibonelelo ezinikezwe apha ngezantsi kwaye uzisebenzise kwinqwelo kwaye uqalise ukufunda ngoku.
I-45% Eyongezelelweyo ye-X kunye ne-T Series ye-ThinkPad yeeLaptops ezineKhowudi Iikhuphoni ze-Coursera kunye neeNkonzo, nge-2021 yeKhowudi yokuPhucula. Zuza ukuya kuthi ga kwi-8x ukubuyisa imali nge-CouponDunia's Assistant Assistant. Yazi ngakumbi. Iyafumaneka nge. ×. Unikelo lusebenza kuphela kwiApp. THUMELA LOKUFUNDA KWIMFONI YAKHO. Sebenzisa ikhowudi yekhuphoni. Thumela.
Fumana i-10% yesaphulelo kwi-odolo yakho ye-Intanethi equka iincwadi ezineKhowudi NGE. IKHODI YEKHONONI. Joyina i-Coursera SIMAHLA! Thatha ezona zifundo zibalaseleyo zehlabathi, kwi-Intanethi! Bonisa Ikhowudi yeKhuphoni. kwiikhuphoni ze-Coursera. 50%. CIMA. YENZA.
Yonwabela Ukuya kuthi ga kwi-15% yeCase yeKhompyutha ngeNcitho encinci + yokuThunyelwa kwaMahala I-Coursera yiwebhusayithi ekwi-intanethi yemfundo ekwi-intanethi. Babonelela ngokufikelela kwilizwe liphela kwezona mfundo zibalaseleyo zehlabathi, basebenzisana neeyunivesithi eziphambili kunye nemibutho yokubonelela ngezifundo ezikwi-intanethi. Iikhuphoni ze-Coursera kunye neekhowudi zekhuphoni zikunceda ukuba ugcine ixesha kunye nemali ngokuthenga kwi-Intanethi. Fumana iikhuphoni zamva zeCorsera kunye
Yonwabela Iqela laMahala iRazer V2 Lanyard Ngapha kwe $129+ e-Coursera.org IiKhonsoni zeKhosi. Offers.com ixhaswa ngabagcini njengawe. Xa uthenga amakhonkco kwindawo yethu, sinokufumana ikhomishini yokusebenzisana. Funda nzulu. Zonke iiOcters (13) Codes (1) Deals Product (1) In-Store & Ads; Amakhadi eZipho ezinesaphulelo (1) Fumana iiNkxaso zeKhosi eNtsha kunye neeNtengiselwano zale mihla.
Fumana i-5% kwi-Sitewide + Ukuthunyelwa kwamahhala kwi-Coursera.org Zeziphi ezona coupons zigqibeleleyo zeCorsera? I-50% yokuKhutshwa kwiKhosi okanye kwiNyanga yokuqala yokuBhaliselwa xa ubhekisa kuMhlobo -Fumana idili Fumana iziCwangciso zoNyaka eziqala kwi- $ 399 / yaMntu -Fumana isivumelwano. Kutshanje kuphelelwe iiKhosi zeeKhosi ezingama-50% kwiNyanga yokuQala yoQeqesho okanye isiQinisekiso seSatifikethi seNgcali.
Yonwabela Ukuya kuma-45% kwi-EL kunye neeLaptops ze-ThinkBook ezineKhowudi Zithatha ixesha elingakanani iiconsera coupons? Iikhowudi zokunyusa i-Coursera ngoku ziyafumaneka xa i-Coursera iseta umhla wokuphelelwa kwekhuphoni. Nangona kunjalo, ezinye zeekhosi ze-Coursera azinawo umhla wokugqibela, kungoko ikhowudi yenyuselo iyakusebenza ide i-Coursera iphume kuluhlu lwezinto zentengiso.
Fumana i-7% yesaphulelo Khetha i-Alienware Gaming Laptop Inkqubo. Iikhuphoni ze-Coursera, iikhowudi zesaphulelo, kunye neepromos zokufikelela kuma-90% esaphulelo kwizifundo ezithile. I-Coursera idlala indima ebalulekileyo ekuphuculeni ishishini leengcali kunye nabafundi. Bazise ngaphezulu kwe-1500 yezifundo ezivela kwiiyunivesithi ezahlukeneyo zehlabathi. Oku kukufumana imfundo efanelekileyo malunga nesihloko ngasinye ...
Yonwabela i-20% yokuKhutshwa kwe-oda yakho ngeKhowudi yeKhuphoni Iikhuphoni ze-Coursera ngo-Septemba ngo-2021-Ukukhetha okuphezulu: Fumana isaphulelo se-50% ngokuDluliselwa kwabahlobo e-Coursera-2 ngaphezulu efumanekayo. Khuphela nje, uncamathisele kwaye ugcine!
Ukuya kuthi ga kwi-50% yesaphulelo kwii-odolo ezinkulu zePizza ngeKhowudi e-Coursera.org Iikhuphoni zakutshanje zeCoursera. I-Coursera liqonga lokufunda elikwi-intanethi elinikezela ngeprimiyamu, ngezifundo ezifikelelekayo ebantwini kwihlabathi liphela. Inkampani yasekwa ngo-2012 kwaye kule mihla kubalwa ngaphezulu kwezigidi ezingama-80 zabafundi abagxile kwikhompyuter nakwisayensi yezentlalo, uhlalutyo lweedatha, kunye nezinye iinkalo.
Extra $250 Off $1999+ NgeKhowudi yeKhuphoni E-Coursera.org Funda kwi-Intanethi kwaye ufumane iziqinisekiso ezixabisekileyo kwiiyunivesithi eziphambili ezinjengeYale, Michigan, Stanford, kunye neenkampani eziphambili ezinje ngeGoogle kunye ne-IBM. Joyina i-Coursera yasimahla kwaye utshintshe ikhondo lakho lobomi ngeedigri, izatifikethi, ubuchule, kunye neeMOOC kwisayensi yedatha, isayensi yekhompyuter, ishishini, kunye nezinye izihloko.
Ukongezwa kwe-13% yokuThengwa koMthengi oMtsha I-Coursera ikunika ithuba lokufumana isaphulelo se-20% kwintengiso yakho. BONISA UMSEBENZI. I-20% icinyiwe. BONISA UMSEBENZI. Iqinisekisiwe yavavanywa. Iqinisekisiwe yavavanywa. I-10% icinyiwe. Isivumelwano.
Yonwabela i-20% yeXabiso elipheleleyo leMidlalo yePC kwiC Coursera.org Gcina iipesenti ezingama-50 okanye ngaphezulu kwi-coursera. I-3 ezinye iikhuphoni ze-coursera kunye neentengiso ziyafumaneka ngoSeptemba 2021.
Coursera.org $ 25 Cima 1 kwiStock Into eneKhowudi I-Coursera liqonga lokufunda elikwi-Intanethi elibonelela kwihlabathi liphela elinikezela ngezifundo ezahlukeneyo, ubungcali, izatifikethi kunye needigri. Iqonga libonelela ngezifundo ngokubambisana ne-190 kunye namaziko emfundo ekumgangatho wehlabathi kubandakanya iStanford, iDuke, iYunivesithi yaseMichigan.
Thatha i-5% yokuKhuphela uMyalelo wakho ngeKhowudi kwi-Coursera.org IiKhonsoni zeKhosi. Iikhuphoni ezidumileyo. Khowudi ikamva lakho ngezakhono zenkqubo. Iikhosi eziqala kwi- $ 11.99 kuphela! I-Udemy isetyenzisiwe: Amaxesha angama-952 Amanqaku ama- $ 100 ngekhowudi yesaphulelo. I-Amazon isetyenzisiwe: amaxesha angama-929 ...
I-Coursera.org i-40% yeOrder yakho ngeKhowudi yokuThengisa Iikhowudi zekhonsoni ye-Coursera ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-65 isaphulelo kunye neekhowudi zesaphulelo seKhosi kunye neekhowudi zokunyusa. Nazi zonke iiKhonsoni zangoku ezisebenzayo, isaphulelo, iikhowudi zokunyusa, imicimbi yemihla ngemihla, izibonelelo kunye nokunyusa okukhethekileyo okusandula ukungeniswa, ukubhalwa ngetwitter kunye nokungqinisiswa ngabasebenzisi. Ukhululekile ukuba uzame amanye amatikiti okanye wabelane nomhlobo wakho ukuze ugcine okungakumbi.
Fumana iipesenti ezili-10 kwiNtengo yakho yokuThengwa kwi-Coursera.org ngeKhowudi Iikholeji zeKhosi (2020) -I-100 yakutshanje yeKhowudi yeKhuphoni kunye neKhowudi yasimahla. Fumana ikhowudi yekhuphoni ye-Coursera yoFundo loMatshini, iPython kunye neNzululwazi yeDatha.
Thatha i-15% kwiNdawo yokuHamba kunye neKhowudi yokuThengisa kwiCoursera.org Ikhowudi yesaphulelo seKhosi yeKhosi -Khowudi ezigqwesileyo zekhuphoni. I-25% icinyiwe (kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo) COURSERA PLUS - 2% Off Coupons, Promo and Voucher Code. I-25% icinyiwe (kwiintsuku eziyi-25 ezidlulileyo) Fumana ikhowudi yekhuphoni esebenzayo kunye nezibonelelo zeendawo ezahlukeneyo zokuthenga kwi-Intanethi ezisetyenziswa ngabasebenzisi abangama-8 +. Yonwabela ukuya kuthi ga kwi-100% yeKhowudi yokuThengisa kunye neeKhuphoni ezisemthethweni kuzo zonke izinto. Nandipha isaphulelo esikhulu se-90% kunye neCursera Plus kwaye ufumane ukubuyisa imali ngelixa uthenga.
Fumana i-10% yokuHlala kwindawo encinci yoku-Odola ubuncinci ngaphezulu kwe- $ 100 Malunga neeKhuphoni ze-Coursera, iidili kunye neCash Back Coursera uzibophelele ekuvuseleleni imfundo ngokwenza ukuba iiklasi ezisemgangathweni zifikeleleke nakubani na, naphi na, simahla. I-Coursera yinkonzo yemfundo ekwi-Intanethi ethi, kunye neeyunivesithi eziphambili kunye nemibutho kwihlabathi liphela, ibonelele ngezifundo ezifanelekileyo, ezifundisayo kunye neziqinisekileyo kwi-Intanethi ...
Thatha iipesenti ezi-3 zeComputer ngeKhowudi Iikhowudi zekhuphoni zeKhosi, iiOffers kunye nezaphulelo. Usebenzisa ikhowudi yekhuphoni ye-Coursera, uya kwenza isaphulelo esihle ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50. Ngoku isimahla kubafundi abasebenzisa i-imeyile yabo yabafundi de kube nguSeptemba 2020. Sebenzisa amatikiti eCursera ukufumana izaphulelo kwizifundo ezithile. I-Coursera idlala indima ebalulekileyo ekukhokeleni abafundi ukuba bafunde umxholo ngamnye ngokweenkcukacha.
Nyuka uye kuma kwiipesenti ezingama-52 Khetha iiNdawo zokuSebenza ze-ThinkPad P IiKhonsoni zeKhosi kunye neeNtengiso. Fumana uLuhlu oluBodwa lweeKhuphoni zeKhosi, iiTikiti zeSaphulelo, iiOfisi, iiDili, iikhowudi zekhuphoni, iikhowudi zokunyusa, kunye neekhowudi zonyuselo zeCoursera.org. Malunga ne-Coursera: I-Coursera yasekwa ngonyaka we-2012 ngoonjingalwazi ababini beStanford Computer Science abafuna ukwabelana ngolwazi lwabo kunye nezakhono kwihlabathi. Oonjingalwazi uDaphne Koller noAndrew Ng babeka iikhosi zabo kwi-intanethi ze ...
Yonwabela iipesenti ezingama-50 kwiicaptops ze-ThinkPad ze-X kunye no-T Zonke iikhonsoni zeKhosi eziSebenzayo kunye neKhowudi yokuPhucula-Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 ngoSeptemba 2021. I-Coursera liqonga lezemfundo elihamba phambili kwi-Intanethi. Kukho amakhulu ezifundo ezikhoyo kumakhulu kwiiyunivesithi eziphambili kunye neenkampani kwilizwe nakwilizwe liphela. I-Coursera ibonelela ngobulungu basimahla, kodwa kukho ezinye iindleko.
Yonwabela i-5% yokukhutshelwa nakweyiphi na iPC + yokuHambisa Simahla Iikhuphoni ze-Coursera kunye neZibonelelo: I-100% yeekhosi zaSIMAHLA kwi-Intanethi ngo-Sep 2021. ICONPON (kwiintsuku eziyi-8 ezidlulileyo) ikhowudi yesaphulelo se-coursera: Funda kwaye ufumane isiQinisekiso: Ikhowudi yokuKhuthaza iCursera: Joyina iiKhosi nge-100% yoQeqesho kwi-Intanethi: Malunga neCursera. I-Coursera liqonga le-eLearning eliqale ngo-2012 ngoku eliyindlu yamawaka ezifundo kunye needigri kuwo onke amabakala emfundo.
Thatha i-10% yokuHamba ngokuhlala ngaphandle kunye neKhowudi yekhuphoni Malunga neConsera Coupons. Jonga ezona Coupons zintle zeCorsera kuluhlu olwahlukeneyo lweendidi. Sinoluhlu oluhleliweyo lwamakhuphoni anceda ukuba uvavanye kwaye ukhethe okona kulungileyo. Ezi Coupons ze-Coursera zikuvumela ukuba ufumane yonke into ngaphandle kokuzabalaza kakhulu. Ungabona uluhlu lweentengiso eziza kuhlaziywa rhoqo kule brand.
Fumana iipesenti ezingama-50 kwi-14 ”ThinkPad T14s Gen 2 Laptop 20WM0052US Nge-Intel I5, iMemori ye-16GB, i-512GB SSD Wamkelekile kwiphepha lethu lamakhuphoni eC Coursera, ujonge izaphulelo kunye nezikhuthazo zakutshanje ze- coursera.org ngoSeptemba 2021. Namhlanje, kukho amatikiti ayi-11 eCursera nezaphulelo. Unokucoca ngokukhawuleza iikhowudi zokunyusa zekhosi yanamhlanje ukuze ufumane izibonelelo ezizodwa okanye eziqinisekisiweyo.
Fumana iipesenti ezingama-45 kwi-E, L, nakwi-ThinkBook Laptops! Akubandakanyi Khetha iimodeli Nantsi ikhowudi yekhuphoni yaseCorinthia. Indawo elungileyo ngokwenene ukuba ufuna iikhowudi zekhuphoni. Unokufumana uninzi lweevenkile ezijongwayo, amatikiti, ukujongana nalapho. Vota. Qhubeka ukhangela kwi-r / CouponCodeExplore. r / CouponCodeExplore. Ikhowudi yekhuphoni 2021, Iidili, izaphulelo, ukuThengiswa kunye nokunye ... 97. Amalungu.
Yonwabela i-30% kwiOdolo yakho Iiyure eziyi-7 ezidlulileyo Iikhuphoni ze-Coursera (2020) -I-100 yakutshanje yeKhosi yeKhowudi yeKhuphiswano yasimahla. Fumana ikhowudi yekhuphoni ye-Coursera yoFundo loMatshini, iPython kunye neNzululwazi yeDatha. Bona kwakho: iikhosi ezishushu 47 ezisetyenzisiweyo bonisa ngaphezulu
Ukongeza i-15% kwiNdawo yokuHlala Iikhowudi zekhuphoni ze-2021 Coursera kunye neeNtengiso eziKhethekileyo (kuvavanyiwe kwaye kwaqinisekiswa) nge-Mar 08, 2021 · Iikhowudi zeKhuphoni ezifumanekayo kunye nezaphulelo. Ngelixa ujonga amakhuphoni e-Coursera, kusenokwenzeka ukuba uya kuqaphela ukuba kukho iindidi ezahlukeneyo zeentengiso ezikhoyo.
Yonwabela iipesenti ezingama-45 kwi-E, L, nakwi-ThinkBook Laptops Iikhuphoni zeKhosi, iikhowudi zokunyusa. Iikhowudi zethu zakutshanje zokunyusa i-Coursera zahlaziywa ngo-Okthobha u-01, 2021. Sihlaziya iikhowudi zokukhuphula i-Coursera rhoqo kwiintsuku ezisi-7. Abathengi abaqhelekileyo bagcina iipesenti ezingama-50 xa besebenzisa ikhowudi yesaphulelo eCursera. Ngaba ufuna isivumelwano seCorsera? Siza kukunceda ugcine ngeekhowudi ezingama-70 zesaphulelo. Gcina ukuya kuthi ga kwi-103 yeedola ngeyona nkonzo yethu intle yeCursera.
Yonwabela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-20 ngentengo encinci I-Coursera Plus; Iibhondi zihlaziywa ngoSeptemba 18, 2021. Uhlalutyo lweC Coursera Plus. Ezona zaphulelo zakutshanje ze-Coursera Plus kwi-intanethi zidweliswe apha ngasentla. Ukusukela izolo, uCouponAnnie unezaphulelo ezili-14 xa zizonke ngokubhekisele kwi-Coursera Plus, ebandakanya ikhowudi yokukhuthaza eyi-1, isivumelwano se-13 kunye nesaphulelo sokuhambisa simahla esingu-0. Ngesaphulelo esiphakathi se-15% isaphulelo ...
Ukongeza i-10% ngaphandle kweSitewide Usebenzisa njani iKhonsoni yeeKhonsathi? Ukusebenzisa ikhowudi yekhuphoni ye-Coursera, cofa nje kwiqhosha elithi "Fumana iKhowudi" kwaye uza kuthunyelwa kwiwebhusayithi yeCursera kwithebhu entsha ngekhonkco lokudibana kunye nepopup enekhowudi yekhuphoni iya kuboniswa. Kuya kufuneka ukhuphele ikhowudi ngokunqakraza kwikhowudi yekhuphoni.
Yonwabela i-25% kwiOfisi yakho Gcina ama-50 okanye nangaphezulu ngeetikiti ze-Coursera, iikhowudi zokunyusa kunye nokujongana ne-Okthobha ka-2021. Fumana ama-19 ngeentengiso ezingama-50 ze-Coursera ezibonelela ngo-Okthobha u-27
Fumana iRazer Chroma Keycap Keychain yasimahla ngeNkcitho eyi- $ 99 Iikhuphoni ze-Coursera Zonke iiKhonsoni zeKhosi ezisebenzayo kunye neKhowudi zokuPhucula zikaNovemba 2020 I-Coursera yasungulwa ngo-2012 njengeqonga lokufunda ngekhompyutha ukunceda nabani na afunde izakhono ezitsha kwiwebhu. Ngaphezulu kwe-47 yezigidi batyikitye ukuba bathathe iiklasi ezikwi-Intanethi ukusukela ngoko. Nokuba ufuna ukufunda izakhono zomsebenzi ezixabisekileyo okanye into entsha oyithandayo, ungathatha iiklasi ezikolweni kwaye ...
Thatha iidola ezili-10 kwiOdolo yeMidlalo ye-EA Udemy simahla Iikhuphoni 2021: 100% Cima kwiPython, ukuFunda ngomatshini kunye nokuninzi ukusuka kwintengiso yedijithali ukuya kufota, uyilo lwegraphic, iikhosi zezemali nokunye. Ngoku fumana i-100% yokufikelela simahla kwizifundo zephupha lakho ngezi khowudi zekhuphoni zasimahla ze-Udemy kunye nezaphulelo namhlanje!
Thatha iipesenti ezingama-15 kwintengo yakho Iikhuphoni ze-Coursera Agasti 2021. Apha uya kufumana iikhowudi zekhuphoni ze-Coursera zika-Agasti 2021. Songeza amatikiti amatsha kwaye siqinisekisa amakhuphoni akhoyo yonke imihla. Qalisa ukonga kwakho kunye neCouponPark.com kwaye ufumane iKhonkoni eqinisekisiweyo kunye nehlaziyiweyo kunye neekhowudi zonyuselo zeC Coursera. Sayina namhlanje kwi-Coursera Coupons 2021 izilumkiso ukuze ungaphoswa yikhowudi yekhuphoni ...
Yonwabela i-10 yeeDola ngokuBhaliswa kweNcwadana Iikhuphoni zeCoursera kunye neeOfisi zikaSeptemba 2021 Zifup. Iiyure ezi-3 ezidlulileyo Zifup.com Ndwendwela indawo. I-Coursera liqonga lokufunda elibonakalayo elivumela abasebenzisi ukuba bathathe isakhono esitsha kwiiveki ezimbalwa okanye bafumane isidanga sonke kwiminyaka embalwa. Esi siza sinabafundi abazizigidi ezingama-63 abathathe inxaxheba kwizifundo ezingaphezu kwama-4,000, iiprojekthi ezili-170, kunye neenkqubo ezingama-20. Ama-200 amaziko emfundo aphezulu emhlabeni ayasebenza ...
Fumana i-5% yokuHamba ngokuhlala kunye neKhowudi kwiCoursera.org Uluhlu lweKhowudi yeKhuphoni yeKhosi. Meyi 14, 2020. 100offdeal. 1. I-Coursera Plus-Ukufikelela okungasikelwanga mda kwizifundo ezingama-3,000 +, i-Specializations, kunye neeSatifikethi seNgcali. Fumana le Deal. 2. Funda nzulu ngokufunda SIMAHLA ngesiQinisekiso | Joyina iiklasi ze-Coursera ezikwi-Intanethi ngoku! Fumana le Deal.
Ukongeza ama-5% kwii-PC ezinale Khowudi Iikhosi zePremiyamu eziZodwa eziSimahla kunye nesiQinisekiso, iipesenti ezingama-100 KWIINKONZO zeZifundo eziPhezulu neziPhezulu zokuthengisa zeDademy, iFutureLearn, i-edureka kunye ne-Coursera |
Fumana i-40% ye-ThinkPad yeLaptops ye-ThinkBooks kunye nokunye Abasebenzisi banokuhlawulela amatikiti e-Coursera afumanekayo eZoutons kwaye bafumane iikhosi zasimahla abanokubhalisa kuzo kwi-Coursera. Abasebenzisi bafumana izibonelelo zebhanki ezizodwa ezivela kwiibhanki ezinjenge-HDFC, i-SBI, i-ICICI, njl. Njl.
Fumana iipesenti ezili-10 kwiOdolo yoMdlalo wePC ngeKhowudi Gcina ngeeKhosi zeekhosi zaSimahla iiKhuphoni kunye neKhowudi yokunyusa amatikiti kunye neekhowudi zokunyusa zika-Agasti, 2021. Iikholeji zeekhosi zaSimahla zale Khosi kunye neKhowudi yokukhutshwa kwesaphulelo: Fumana iiKhuphoni zale mihla kunye neeZipho zeCoursera kwiWebhusayithi yabo.